Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.4.1 eBird
eBird manangona tahirin-kevitra momba ny vorona avy amin'ny birders; mpilatsaka an-tsitrapo dia afaka manome sehatra ara-jeografia fa tsy misy afaka mitovy ekipa fikarohana.
Vorona dia na aiza na aiza, ary ornithologues te hahalala izay vorona rehetra dia isaky ny indray mipi-maso. Nomena toy izany tonga lafatra dataset, ornithologues afaka hiresaka lehibe maro hevitra ny amin'ny saha. Mazava ho azy, manangona antontan-kevitra io dia mihoatra noho ny votoatiny na inona na inona manokana mpikaroka. Mandritra izany fotoana izany fa maniry ornithologues karena sy feno kokoa angona, "birders" -people izay mandeha vorona miambina ny voly-dia foana fandinihana vorona sy ny fandraketana ny zavatra hitany. Ireo vondrom-piarahamonina roa manana tantara lava be ny miara-miasa, fa izao fiarahamiasa efa voaova ny nomerika taona. eBird dia nizara tetikasa fanangonana antontan'isa izay solicits vaovao avy birders manerana izao tontolo izao, ka dia efa nahazo maherin'ny 260 tapitrisa avy amin'ny 250.000 vorona no nahitana mpandray anjara (Kelling et al. 2015) .
Talohan'ny ny fanombohana ny eBird, betsaka ny tahirin-kevitra dia namorona ny birders Tsy vonona ny mpikaroka:
"Ao amin'ny efi-trano an'arivony manerana izao tontolo izao amin'izao fotoana izao maro be mandry kahie, tondro karatra, misy naoty checklists, ary diary. Ireo amintsika anjara amin'ny andrim-panjakana birding mahafantatra tsara ny fahasorenana ny nandre hatrany hatrany mikasika ny 'ny tara ny vorona dadatoako rakitsoratra' Fantatsika ny fomba mety ho sarobidy izy ireo. Mampalahelo fa izahay koa tsy afaka mahafantatra isika hampiasa azy ireo. " (Fitzpatrick et al. 2002)
Noho ny manana tahirin-kevitra sarobidy izany mipetraka maromaro, eBird manome fahafahana birders ny mampakatra azy ho any amin'ny foibe, Hafanàm-po an banky angona. Data nakarina ho eBird dia mirakitra enina manan-danja saha: iza, izay, raha, inona no karazana, firy, sy ny ezaka. Fa tsy birding mpamaky, "ezaka" dia manondro ny fomba ampiasaina rehefa manao fandinihana. Data quality manomboka taratasim-bola na dia eo anoloan'ny tahirin-kevitra dia nakarina. Birders miezaka ny manaiky tsy mahazatra tatitra-toy ny tatitra momba ny tena tsy fahita firy karazana, avo indrindra jerena, na tsy amin'ny fotoana tatitra-dia flagged, ary nangataka hatrany ny vohikala fampahalalana fanampiny, toy ny sary. Rehefa avy manangona izany fampahalalana fanampiny, ny flagged tatitra dia nalefa tany amin'ny iray amin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo an-jatony isam-paritra bebe kokoa ny manam-pahaizana ho an'ny famerenana. Taorian'ny famotorana eo anivon'ny manam-pahaizana, anisan'izany ny faritra azo atao fanampiny taratasy tamin'ny birder-ny flagged tatitra dia na ariana toy ny tsy azo antoka, na izy ireo niditra tao eBird banky angona (Kelling et al. 2012) . Io tahiry ny hanakona fandinihana dia avy eo misy ny olona eto amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny aterineto, ary hatreto, efa ho 100 ataon'ny mpiara-nandinika boky sy gazety no nampiasa izany (Bonney et al. 2014) . eBird mazava dia mampiseho fa an-tsitrapo birders dia afaka manangona tahirin-kevitra izay mahasoa ny tena ornithology fikarohana.
Ny iray amin'ireo hatsaran'ny eBird dia fa hoe nambabo ny "asa" izay efa nitranga, amin'ity tranga ity, birding. Io endri-javatra dia manome fahafahana ny tetikasa mba hahazoana ambaratonga lehibe. Na izany aza, ny "asa" ataon'ny birders dia tsy tena mitovy ny rakitra ilaina ny ornithologues. Ohatra, ao amin'ny eBird, fanangonana antontan'isa dia tapa-kevitra ny toerana misy ny birders tsy ny toerana misy ny vorona. Midika izany, ohatra, ny ankamaroan'ny fanamarihana mazàna tonga akaiky ny lalana (Kelling et al. 2012; Kelling et al. 2015) . Ankoatra izany mitovy velively ny fizarazarana ny ezaka ny toerana, ny tena fanamarihana atao amin'ny birders dia tsy tonga lafatra foana. Misy, ohatra, birders ihany no mampakatra vaovao momba ny karazana mahaliana izay heveriny fa tsy nampakaranao vaovao momba karazana rehetra izay nitandrina.
eBird mpikaroka manana vahaolana roa lehibe ireo olana kalitao angon-drakitra, olana mipoitra amin'ny maro hafa nizara tetikasa fanangonana antontan'isa. Voalohany, dia foana ny mpikaroka eBird miezaka hanatsarana ny hatsaran'ny ny angon-drakitra napetraky birders. Ohatra, eBird manolotra fanabeazana ny mpandray anjara, ary efa namorona Visualizations ny mpandray anjara tsirairay ny tahirin-kevitra izay, araka ny famolavolana, mampirisika ny birders mba mampakatra vaovao momba ny karazana izay nitandrina, fa tsy hoe ny subset (Wood et al. 2011; Wiggins 2011) . Faharoa, eBird mpikaroka mampiasa antontan'isa modely izay miezaka mba hanitsiana ny tabataba sy ny heterogeneous toetry ny manta angona. Tsy mbola mazava raha antontan'isa ireo modely manala tanteraka mifanavakavaka avy amin'ny angon-drakitra, fa ornithologues dia matoky ampy amin'ny kalitaon'ny nanitsy eBird tahirin-kevitra izay, araka ny efa voalaza tetsy aloha, dia efa nampiasaina tao efa ho 100 ataon'ny mpiara-nandinika boky sy gazety ara-tsiansa.
Maro tsy ornithologues dia tena resy lahatra voalohany rehefa mandre momba ny eBird voalohany. Raha ny hevitro, avy amin'izao tsy finoana dia avy nieritreritra eBird amin'ny lalana diso. Maro ny olona mieritreritra aloha "Moa ny tahirin-kevitra eBird tonga lafatra?", Sy ny valiny dia tsy tanteraka. Na izany aza, dia tsy tsara fanontaniana. Ny fanontaniana tsara dia hoe: "Fa fanontaniana fikarohana sasany, dia ny eBird tsara noho ny angon-drakitra misy rakitra ornithology?" Noho izany fanontaniana ny valiny dia tena eny, amin'ny ampahany noho ny fanontaniana mahaliana maro tsy misy zava-misy hafa ny nizara fanangonana antontan'isa.
Ny tetikasa eBird mampiseho fa azo atao ny anjara mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny fanangonana ny tahirin-kevitra manan-danja ara-tsiansa. Na izany aza, eBird, ary mifandray tetikasa, mampiseho fa zava-tsarotra mifandray amin'ny santionany sy ny angona toetra dia nizara ahiahy ho an'ny tetikasa fanangonana antontan'isa. Ho hitantsika ao amin'ny fizarana manaraka, na izany aza, miaraka amin'ny famolavolana feno hafetsena sy ny teknolojia olana ireo dia azo hamaivanina amin'ny toe-javatra sasany.